Izixhobo zokusebenza ezingaphantsi kwe-12s-Isiseko soMvuzo
Ikhaya Ngawe Izixhobo zokusebenza ezingaphantsi kwe-12s
Izixhobo ezikweli phepha zifanelekile phantsi kwe-12s. Bajolise ekuncedeni amakhwenkwe, kodwa amantombazana nawo anokufumana eluncedo.
Ewe kuyindalo ngokupheleleyo ukuba nomdla malunga nokwabelana ngesondo, ngakumbi ngexesha nasemva kokufikisa. Nangona kunjalo, uhlobo lwesini olubonakala kwimifanekiso engamanyala kwi-Intanethi ayenzelwanga ukukunceda ufumane isazisi sakho sokwenene. Akuncedi ukuba ufunde ngokuthanda ubudlelwane bezesondo, nokuba. Endaweni yoko injongo yayo kukuvuselela iimvakalelo ezinje kuwe kangangokuba ufuna ukubuyela umva ngaphezulu.
Imifanekiso engamanyala kwi-Intanethi yishishini lezorhwebo elixabisa iibhiliyoni zeeponti. Kukho ukuthengisa intengiso kunye nokuqokelela ulwazi ngawe. Olu lwazi luthengiswa kwezinye iinkampani ukuze luzuze. Akukho nto injengewebhusayithi yasimahla ye-porn. Kukho umngcipheko kwimpilo yakho yengqondo nangokwasemzimbeni kunye nokukhula kobudlelwane. Imifanekiso engamanyala inokwenzakalisa ukufikelela esikolweni kwaye ikhokelele ekubandakanyekeni kulwaphulo mthetho.
Umthetho omtsha kwiHarms ekwi-Intanethi kungoku ixoxwa yiPalamente yase-UK.
"Izinto Ongazaziyo Ngephonografi" yaphuhliswa ngoncedo lukatata ofundisa isayensi. Inceda abantwana, abazali kunye nootitshala ukuba babe nolwazi malunga nefuthe elibi lokusebenzisa iphonografi. Inzululwazi kunye nonqulo, "Izinto ongazi malunga ne-Porn" zichaza ezinye izinto ezinokubangela ukusetyenziswa koononophelo ngendlela elula, elula ukuqonda. Izoba ukufana phakathi kokutya okungafunekiyo kunye noononophala, kwaye ichaze ukuba kutheni le misebenzi inakho "ukuqeqesha" ingqondo, kwaye ibe yimikhwa emibi. Oku kuvumela ulutsha ukuba lukhethe ulwazi olunolwazi malunga nazo zonke izinto ezinokubakho kunye nemisebenzi.
"Izinto Ongazaziyo Ngephonografi" luthotho olunamacandelo amathathu kwaye luyafumaneka kwi-YouTube.
Icandelo 1 (9.24)
Icandelo 2 (9.49)
Icandelo 3 (7.29)